eNasha.com - परेवा बने समस्या
परेवा बने समस्या
हलिउडका बासिन्दाका लागि त्यहाँका परेवा टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् । त्यहाँ परेवाको संख्या यति बढेर आएको छ कि जे गर्दा पनि परेवासँग ठोक्किनु त साधारण कुरा भयो, परेवाको विष्ठ्याईका कारण उनीहरु परेशान भएका हुन् ।
एपी समाचार संस्थाका अनुसार यो समस्यालाई उनीहरुले समाधान गर्ने दीर्घकालीन उपाय रचेका छन् । तिनले भाले परेवाहरुको बन्ध्याकरण गरिदिने भएका छन् ।
"मलाई लाग्छ, हामीले खराब अवस्थाको ज्यादै असल समाधान निकालेका छौँ" आरजील सिभिक एशोसिएशनकी लाउरा डोडसनले भनिन्- "तिनको 'आची'लाई समाधान गर्ने उपाय यिनलाई बन्ध्याकरण गर्नु नै हो ।"
यो अभियानलाई उनीहरु ओभोकन्ट्रोल पाइलट प्रोग्राम नामाकरण गरेका छन् । यस्तो किसिमको अभियान देशमै पहिलो भएको उनको विश्वास छ । त्यसो त यो अभियानका बारेमा पिपल अफ दि इथिकल टि्रटमेन्ट अफ एनिमल्स -पेटा) र हृयुमन सोसाइटी अफ द युनाइटेड स्टेट्सजस्ता संस्थाहरुले गहिरो अभिरुचि देखाएका छन् । यिनको बन्ध्याकरण गर्नुभन्दा पनि उनीहरुले घरघरमा विद्युतीय ढोका राख्नेलगायतका अन्य अवस्था विचार गर्ने हो कि भन्ने आशय पनि नराखेका होइनन् ।
५ हजारभन्दा बढी परेवालाई एकै ठाउँमा भेला गराएर २५ पाउण्ड (साढे ११ किलो) भन्दा बढी खानेकुरा खुवाउने बर्ड लेडी नामले चिनिएकी महिलामाथि पनि परेवाको संख्या बढेकोमा आरोप लगाइएको छ । उनले हलिउडका विभिन्न २९ ठाउँमा हरेक दिन ११ किलोभन्दा बढी सामग्री खुवाउने गरेकी छिन् ।
यो कार्यक्रमको सफलता वा विफलता एक वर्षभत्रै पत्ता लाग्ने कुरामा कार्यक्रम सञ्चालकहरु ढुक्क छन् । आउँदो २०१२ सम्ममा हलिउडका परेवाहरुको संख्या उल्लेख्य घट्ने कुरामा डडसन ढुक्क छिन् ।
परिस्थिति जनावर माया भव्यता सुन्दरी मूर्ख्याइँ इन्टरनेट श्रीमानश्रीमती गुगल नग्नता फट्याइँ सेलेब्रिटी उपाय बलिउड उदेकलाग्दो यस्तो पनि ! विज्ञापन हलिउड मुद्दा मामिला प्रविधि
विवाद गायिका गायक कन्सर्ट हल्ला ट्रयाक बाहिर उपलब्धि लुकेका कुरा रिलिज परिस्थिति अवार्ड कीर्तिमान बजारमा क्या बात ! रुचि पेज थ्री प्रेम र विवाह